"दूधको चियामा राखेर कोइरालाले कोइरालाको रूपमा" - यो कसरी प्ले'न जानु बेकरको उपचारको वर्णन गर्दछ, यसको धेरै मिठो, अझ ब्रिटिश भिडियो स्लॉट। तपाईं त्यससँग चिनी चाहनुहुन्छ? यस गेमलाई के देख्न को लागी पढ्न दिनुहोस्।
बेकरको उपचार खेल विशेषताहरू
बेकरको उपचार एक मानक पाँच रिलेमा खेलेको छ, तीन पङ्क्तिबद्ध लेआउट पन्द्रह वेतनमार्फत जसले रिसेलको दुवै पक्षबाट भुक्तानी गर्दछ। बिस्तारै पाउन्ड बाट 0.15 अधिकतम £ £ 75 सम्म। Play'n GO को आफ्नै अस्थिरता स्तरको अनुसार, खेलमा उच्च अस्थिरता स्लॉटको रूपमा खेलमा 96.04% RTP छ र वर्गीकृत गरिन्छ।
बेकरले निशुल्क स्पिन र बोनसको उपचार गर्दछ
बेकरको उपचारमा दुई मुख्य बोनस विशेषताहरू छन्, जुन अहिले जटिल जटिल हुन सक्छ तर तपाईले वास्तवमा उनीहरूले काममा देख्न सक्दछन्।
सबै रीलहरू यसको साथमा केकसँग सम्बन्धित छन्, राइट से र दाँया भन्दा बढी बहुमूल्य हुन सक्छ कि रील5मा उच्चतम भुक्तानी एक झूट। रीलभन्दा माथि तपाईंले एक माइटर देख्नुहुनेछ जसमा तपाईले धेरै टोकनहरू सङ्कलन गर्नुहुन्छ - उच्च भुक्तानी केकहरूमा स्ट्याक गरिएको पूर्ण रिेल ल्यान्डिङ गर्न तपाईंलाई टोकन हुनेछ। फ्लो पावर स्पिन ट्रिगर गर्न मिटरलाई तीन टोकनहरू पूरा गर्नुहोस्।
प्रत्येक रिलेसँग यसको आफ्नै सेट छ जुन मञ्चमा प्रतीकहरूको संग्रह सङ्कलन गरिएको छ। यो विशेषता निम्नानुसार छन्:
कपकेक पावर:3नि: शुल्क स्पिनहरू दुई समान रीलहरूसँग
ब्लुबेरी पाई पावर:3नि: शुल्क स्पिनसँग एक जंगली रील
गाजर केक पावर:3नि: शुल्क स्पिन जसमा सबै गाजर केक प्रतीक जंगली मा परिणत हुन्छ
नींबू चीजकेक पावर:3नि: शुल्क स्पिन जसमा सबै जंगली रेल भर्न विस्तार गर्दछ
स्ट्रबबेरी स्पंज पावर:3नि: शुल्क स्पिनहरू जहाँ सबै Macaron प्रतीकहरू एकल Macaron प्रतीकमा परिणत हुन्छन्
विजेट स्कोर गर्न पनि उच्च क्षमता संग अर्को सुविधा बेक अफ सुविधा हो, जहाँ तपाइँ आफ्नो शर्त मार्फत ठूलो 5000x जित्न सक्नुहुनेछ। यदि सबै5केक प्रतीकले तिनीहरूको व्यक्तिगत रिेलमा ल्याउनेछ भने, तपाइँ यस सुविधालाई ट्रिगर गर्नेछ जहाँ केक यसको रीलमा स्ट्याक गरिएको छ भने तपाईले नि: शुल्क स्पिन पाउनुहुनेछ; तपाईं बेक बन्द सुविधा र एक विशाल इनाममा 10 निःशुल्क स्पिनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ!
साथै, यदि फ्याक पावर स्पिन खेलिरहँदा ब्याक अफ सुविधा सक्रिय हुन्छ भने, तपाईंले 80x को तत्काल इनाम पाउनुहुनेछ! बेक अफ सुविधामा, प्रत्येक स्पिनमा एक फ्लाइट पावर सुविधा सक्रिय गरिएको छ, तर बेक अफ मोडमा सक्रिय रहनेछ - यदि तपाईं नि: शुल्क स्पिनहरूसँग यो बोनस प्रविष्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईं एकै समयमा सक्रिय सबै सुविधाहरूसँग खेल्नु हुनेछ।
बेकरको उपचार भुक्तानी
बेकरको उपचारमा पाँच तल्लो भुक्तानी चिह्नहरू छन् - Macarons - जुन विभिन्न रंगहरूमा आउँछ। उच्च भुक्तानी प्रतीक डेसर्ट - लेमन चेससेक, स्ट्राबेरी स्पंज, गाजर केक, कपकेक र ब्लुबेरी पाई हुन्। खेलको जंगली प्रतीक बेरी लेयर गरिएको केक हो, जसले 40x मा सबैभन्दा उच्च भुक्तानी नियमित प्रतीक, स्ट्राबेरी स्पंजको रूपमा प्रदान गर्दछ जुन पाँच प्रकारको शर्त हो।
बेकरको उपचार ग्राफिक्स र ध्वनि
रील सेट एक आरामदायक कैफे टेबल बनाइन्छ, जबकि केकले प्रतीकहरूको रूपमा रिल्सको प्रयोग गर्दछ। यो तपाईंको सामान्य भिडियो स्लॉट सेटअप होइन, त्यसैले शीर्ष अंकहरू Play'n जानु यहाँ जानुहोस्! साउन्डट्र्याक रमाइलो र खुसी छ, र मात्रामा जम्मा गरेको आवाज बढ्छ - केहि 'Play'n GO पहिले नै उनीहरूको निर्माणको अन्य भिडियो स्लटमा गरेको छ, जस्तै Reactoonz.
बेकरको उपचार निष्कर्ष
बेकरको उपचार निश्चित रूपले एक उपचारमा जान्छ - यो एक उत्कृष्ट विषय र उत्कृष्ट ग्राफिक्स, यसको धेरै बोनस सुविधा र 96.04% को सभ्य आरटीपीको लागि धेरै उत्साह छ। यदि तपाईं एक चीनी भाग्य फैंसी गर्नुहुन्छ भने, तपाईं बेक अफ सुविधाको हेलिकप्टरमा तातो हुनुहुनेछ जसले निश्चित रूपले तपाईंको जीत बढाउनेछ - आशा छ कि तपाईंको शाइन स्तर पनि होइन, यद्यपि, तपाईले तपाइँको डाक्टरको साथ समस्यामा हुनुहुनेछ।
Play'n जाओ - Växjö मा मुख्य मुख्य मुख्यालय संग, स्वीडेन - अनलाइन गेमिंग र मनोरञ्जनको लागि स्मार्ट, मेनु-अर्डर समाधानको पूर्ण दायरा डेलिभर गर्ने समर्पित प्रोफेसरहरूको तंग-बुट टोलीद्वारा स्थापित गरिएको थियो।
Play'n GO मा कार्यान्वयन र कुञ्जी कर्मचारीहरू इन्टरनेट गेमिङ उद्योगमा प्रत्येक 15 वर्ष भन्दा बढी अनुभव छ। 1997 मा तिनीहरूले पहिलो गेमिंग समाधानको विकास गरे, आजका प्रतियोगीहरूको एक उप-ठेकेदारको रूपमा अभिनय गरे। उनीहरूले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरूमा प्रमुख गेमिङ निगमहरूको प्रयोग गरी प्रमुख अनलाइन गेमिङ उत्पादनहरूको विकासको नेतृत्व गरेका छन्। आज कम्पनीले आफैलाई नै ठूलो बनाएको छ, र आज उनी हंगरीमा एक शाखा कार्यालय छ र लाइसेन्स लिन्छन् UK, माल्टा र अल्डर्न। उनीहरूले भर्खरै मनिला, फिलिपिन्समा फिलिनिज सुरु गरेका हुन्।
उनीहरूको टोलीले उनीहरूको उत्पादनमा सबै स्तरमा गुणस्तरको उच्चतम तहलाई सघाउँछ। उनीहरूले हतियारको बारेमा जान्न र सम्भावित "बोतल-गर्क" बारे सम्भावित तरिका पत्ता लगाएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाईन् कि अन्य विकासकर्ताहरूले अन्तमा उपलब्ध हुन सक्नेछन्। नवीनतम उपलब्ध टेक्नोलोजीसँग विस्तृत अनुभव संयोजन गरेर तिनीहरू सबै उत्पादनमा वास्तवमा आधुनिक, पूर्ण अत्यधिक लचीला।
Play'n GO मोबाइल बजारमा सबै भन्दा ठूलो अपरेटरहरूको विकास भएको छ, र अधिक वा कम सबै खेलहरू प्रस्ताव पनि मोबाइल यन्त्रहरूको लागि प्रस्तावित छन्। दुई वर्षको सीधै, उनीहरूले मोबाइल उत्पादको लागि लन्डनमा वार्षिक IGA पुरस्कारमा प्रतिष्ठित पुरस्कार जितेको छ!
मन्टी पाइन्ट स्प्यामलटट
ग्रह भाग्य अपडेट गरिएको: जनवरी 20, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 ग्रह भाग्य
2.0.0.1 भाग्यशाली संख्या
2.0.0.2 गोल्डेन कोलाहरु
2.0.0.3 मन्टी पाइन्ट स्प्यामलटट
2.0.0.4 पिज्जा पुरस्कार
2.0.0.5 थप ताजा फलहरू
2.0.0.7 मार्वल रूले
2.0.0.8 Granny Prix